Nomontsanin’izy ireo tanteraka ny ekipa seiseloazy teo ami’ny lalao manasa-dalana, tamin’ny alalan’ny isa 93 no ho 53.
Tamin’ny ampahaefa-potoana voalohany, dia efa nanenjika isa hatrany ny ekipa seiseloazy, izay tarihin’i Souffr Lucia sy Beguita Fontaine 24 no ho 16. Totoafo avy eo any fanenjehana isa tamin’ny alalan’ny valim-panafihana nataon-dry Maiwen, Ange Rokia, ka isa 45 no ho 27 no nisarihana teo amin’ny ampahefa-potoana faharoa.
Nanomboka teo dia nanomboka nihanangatsiaka ireo mpijery mpanohana an’i Seychelles. Tsy nitsahatra nampidi-baolina nisesisesy ny ekipa malagasy raha nitsitaitaika kosa izany ho an’ireo mpampiantrano, 66 no ho 39 no nisarahana teo amin’ny ampahefa-potoana fahatelo. Tonga hatrany amin’ny 93 no ho 53 ny isa tany amin’ny fiafaran’ny lalao.
« Mino aho fa mety tsara ny fihaonana tamin’ireo ekipan’i Seychelles. Nety tsara avokoa na ny fanafihana na ny fiarovan-tena. Ny tanjona dia hahazo ny medaly volamena ary hiezaka hamoaka ny herinay rehetra izahay hanatratrarana izany tanjona izany », hoy i Prisca Razananirina, izay mendrika indrindra tamin’ny fitifirana isa telo, nandritra ny « Afrobasket woman 2009 ».
Amin’ny alahady ho avy izao no hanaovana ny lalao famaranana, eo amin’i Madagasikara sy La Réunion, ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Roche Caïman ihany. Ireto farany izay nandresy an’i Maorisy tamin’ny isa 85 no ho 44 tamin’ny lalao manasa-dalana.